Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii ugu dambaysay Xarunta Dhexe ee JWXO iyo faahfaahinta Dagaalada ka socda gudaha Ogadenya
Warbixintii ugu dambaysay Xarunta Dhexe ee JWXO iyo faahfaahinta Dagaalada ka socda gudaha Ogadenya
Wararka naga soo gaadhay wadanka Ogadenia ee Xarunta Dhexe ee JWXO ay noo soo dirtay ayaa sheegaya dagaalo badan oo ciidanka cadawga lagu naafeeyay. Dagaaladan ayaa khasaare laxaad leh lagu gaadhsiiyay cadawga oo isugu jira dil iyo dhaawac. Tirakoobka ciidanka kaga bakhtiyay cadawga goobaha dagaalka ee la hubsaday ayaa kor u dhaafay 46 askari oo darajooyin kala duwan watay, meesha dhaawaca uu intaa ka badan yahay. Faahfaahinta dagaaladaa ayaa u dhacay sidan;
9/1/14 Gabiqowyaha oo Dhuxun katirsan dagaal ku dhexmaray CWXO iyo kuwa kumaysida Itoobiya waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/1/14 Jacjacle oo Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/1/14 Banyare oo Iimaybari katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/1/14 Bardaale oo Galaalshe katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin tiisa lahaynin.
14/1/14 Banyare oo Iimaybari katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/1/14 Falfal oo Dhagaxbuur katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dhaawacay 3 askari.
16/1/14 Karinka’owxuseen oo Dagmada Haarcad ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/1/14 Elale oo Goday katirsan weerar aad uxoogbadan oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa goobta bakhtigooda lagu arkay 8 askari dhaawac aad ubadana waa lagu gaadhsiiyay sidoo kale waxaa ciidanka cadawga laga furtay hub iyo saanab milatari oo aad ubadan.
Isla 16/1/14 Baridiilaha oo Galaalshe katirsan iyo Maraaley oo Dhagxbuur katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare badan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
17/1/14 Galadiid oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 7 askari tiro kalana waa lagaga dhaawacay.